DHISMAHA CIIDAMADA! – Nabad & Nolol
Dhismaha iyo tayeynta ciidamada qalabka sida waa talaabadii ugu horeeyay ee uu xooga saaray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Madaxweynaha ayaa xafiis uu ku shaqeeyo ka furtay xarunta wasaaradda Gaashaandhiga halkaas uu si maalinle ah uga waday shaqadiisa ku aadan dib u habeynta ciidamada.
Sanad iyo bar ay jirtay dowlada uu hogaamiyo Madaxweyne Farmaajo waxaa xooga la saaray in ciidamadu helaan xuquuqdooda sida mushaharka, gunooyinka iyo raashinka. Madaxda qaranka ayaa furay tababaro kor loogu qaadayo aqoonta ciidamada kala duwan sida, Mulaterigga, Booliska iyo Asluubta, sidoo kale waxaa isbedello lagu sameeyay hogaamada ciidamada iyaddoo markii u horeeysay hormuudka hogaamada ciidamada loo magacaabay saraakiil dhalinyaro ah oo tababaro ku qaatay dalka gudahiisa iyo dibadiisa.
Dowladu, waxa ay xooga saartay in la saxo nidmaamka mushahar bixinta ciidamada, askari walba oo ka mid ah ciidamada qalabka sida waxaa loo sameeyay koonto uu bil walba ugu hagaago mushaharkiisa iyo xuquuqda kale ee uu leeyahay.
Bishii Desember, sanadkii 2017 waxaa ka dhacay Muqdisho shirka amniga iyo iskaashiga caalamka iyo soomaalida kaas oo looga hadlay xaalada amniga soomaaliya. Waxaa la go’aamiyay oo lagu heshiiyay dhismaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kadib heshiis dhexmaray dowlada dhexe iyo dowlada xubnaha ka ah.
Ciidamada dhismahooda lagu heshiiyay ayaa kala ah ciidanka dhulka, cirka iyo badda.
Waxaa jira saaxiibo ka caawiya soomaaliya dhismaha ciidamada qalabka sida, waxaa ka mid ah dowlada Turkiga oo soomaaliya ka dhistay xero mulateri oo ah tan ugu weyn ee ay ku leeyihiin banaanka Turkiga.
Bishii September sanadkii 2017, ayaa xariga laga jaray, iyadoo markii ugu horeeysay lagu xereeyay kun iyo shan boqol oo askari si loo siiyo aqoon iyo tababar caalami ah.
Kumanaan dhalinyaro ah oo si mutadawacnimo ah ugu soo biiray ciidamada qalabka sida ayaa la siiyay koorsooyin tababar kala duwan kuwaas oo ugu dambeyntii madaxda qaranku u soo xireen tababarka.
Marka la fiiriyo dadaadlka dowladugu ugu jirto dhismaha qaranka iyo sida ay madaxda uga go’antahay in dalku yeesho ciidamo la isku haleyn karo waxaa la filayaa in dhowaan ay soomaaliya yeelato ciidamo xoogan.
SOO CELINTA HAWADA!
DIB USOO CELINTA SHARAFTA SOOMAALIYA
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah u furay Kalfadhigii Baarlamanka dalka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhawaaqay goobaha lagu dhisayo Barnaamijka Is-xilqaanka
Dekedda Muqdisho oo shaqeyneysa habeen iyo maalin. SAWIRRO
Golaha Dhaqaalaha Qaranka ee maanta la daah furay, waa guul weyn oo dalku gaaray.
Howl-gallada Ciidanka Xoogga Dalka & Gabaldhaca Alshabaab!!
War bixinta Nabad&Nolol
Copyright @2017 - Nabad&Nolol